Dr Zarihuun Mahaammad: Jimaa dhorkuun gonkumaa waan danda'amu miti - BBC News Afaan Oromoo
Galiin jimaa irraa argamu 'utubaa diinagdee' kan jedhame buna erga caalee bubbuleera. Qonnaan bultoonni lafa buna isaanii jimaatti jijjiiraa jiru. Kan jechuun lafi qonnaa jimaaf tolfame bal'ataa jira. Daldaltonni isaas tahe fayyadamtoonni baay'ataniiru.
Yeroo dhihootti jimaan sharafa biyya alaa argamsiisuun buna bakka bu'u qofaa osoo hintaane galii buna irraa argame dachaa argamsiisuu danda'eera. Yeroo ammaa oomishtoonni jimaa miiliyoona 4'tti tilmaamaman akka jiran qoranoowwan agarsiisu.
'Daangaa miti, daldala jimaatu Oromiyaafi Somaalee walitti buuse'
Haroo Haramaayaa: bishaan osoo hintaane dhukkeetu irra ciisa
Faayidaa diinagdee argamsiisuun faallaatti garuu miidhaan hawaasummaa jimaan dhaqqabsiisu yaaddoo ta'eera. Sababa kanaan, Naannoon Amaaraa wixinee seeraa jimaa dhorku kan baase yoo tahu yeroo ammaa qonnaan bultoonni naannichaa oyiruu keessaa jimaa buqqaasaa akka jiran himama.
Jimaa irratti qorannoo garaa garaa kan taasisan akkasumas waraqaa qorannoo kan dhiheessan Dr Zarihuun Mahaammadin dubbisneerra.
Isaan dhaabbata qorannoo 'Forum for Social Studies' jimaa irratti qorannoo hedduu taasise jalatti qoratu.
BBC: Jimaa irratti tarkaanfii akkamiitu fudhatamuu qaba?
Dr Zarihuun: Yeroo ammaa jimaa irratti ejjennoowwan waldhiiban lamatu jira. Miidhaa hawaasummaa, diinagdee fi fayyaa kaasuun haa dhorkamu kan jedhan jiru. Gama kaaniin, jimaan nama hedduu jiraachisa waan ta'ef itti bu'amu hinqabu kan jedhu jira. Kanaafuu, wanti hordofamu qabu daandii gidduu jirudha.
Qorannoon akka mirkaneesseetti jimaa fayyadamuun miidhaa ni qabaata. Mootummaafi hawaasni immoo namoota kanaaf saaxilaman kunuunsuun dirqama qaba.
Gama kaaniin immoo, hawaasni jimaa oomishu filmaata maalii qaba? Galii guddaa waan argamsiisaa jiruufis maaliin bakka buusuun danda'ama? Kan jedhan gadifageenyaan ilaaluun barbaachisa.
BBC: Daandiin gidduu jiru maali?
Dr Zarihuun: Daandiin gidduu jiru jimaa kaanumaan itti dhiisuu ykn dhorkuu osoo hin taane to'achuu (regulate) dha. Haala amma jirun jimaa dhorkuun sababoota adda addaan waan hin danda'amnedha.
Biyyoota garaa garaatti kaanaabiis dhorkuun kontirobaandiin akka baay'atu taasiseera. Kan jimaas kanarra hinjiru. Filmaata maalii dhiheessine dhorkina?
Jimaan bakkeewwan tokko tokkotti waggoota dheeraaf aadaafi eenyummaa hawaasaatti waan wal hidheef dhorkuun dhibbaa siyaasaallee qabaachuu danda'a.
To'achuunis salphaa miti. Namoonni jimaa akka salphatti hin arganne ashuuraa(qaraxa) irra kaa'u kan jedhan jiru. Faallaan immoo maaliif? Tamboofi alkoolii irratti qaraxa hangamiitu irra kaa'ame kan jedhan jiru.
Gama qorattootaan falmiin gara to'annoo taasisuu jedhutti dhufeera. To'annoon kunis akkamitti haa oomishamu? Akkamin bakka bakatti haa sosso'u (geejjiba)? Akkamin hojiirra haa oolu? Jedhu irratti kan xiyyeffatedha.
Goodayyaa suuraa Dr Zarihuun Mahaammad
BBC: Mootummaan imaammata jimaa irratti baase waan hin qabnef ejjennoo hinqabuu?
Dr Zarihuun: Jimaa irratti imaammati dhibuu qofaa osoo hintaane mariiyyuu erga eegalle hin turre. Dhaabbati 'Forum for Social Studies (FSS)' jimaa irratti waltajjii marii qopheessuun dursa fudhata. Mariin hedduu taasifamuus imaammataaf akka galteetti fayyadamuuf hin hanqata. Yaadni waldhiibuu osoo jiru imaammata baasuun salphaa akka hintaane nan hubadha.
Imaammata naannoo hundatti erga takkaa hojiirra oolu baasna jechuun garuu rakkisaa natti fakkaata. Bakkeen jimaan itti argameera jedhamaniifi waggaa dheeraaf qama'amaa turee kanneen reefu erga oomishuu eegalanii waggaa kudhan hin guunne imaammata walfakkaataa hordofuu hin danda'an.
Kanaafuu filmaata tokko ta'u kan danda'u imaammata naannoo haammate baasuudha. Kanneen jimaa irratti qorannoo taasisna jenne qofa osoo hintaane mariin namoota gadii jiran hirmaachise taasifamuu qaba. Ilaalchi namoota gajjallaa jiran barbaachisaadha. Yeroosi yaada tabba bahe kan qabaachuu dandeenyu.
BBC: Jimaa to'achuun kan danda'amu dhiheessii irratti xiyyeeffachuunii?
Dr Zarihuun: Eeyyeen. Tarkaanfiiwwan hedduu dhiheessii irratti kan xiyyeeffatanidha. Tarkaanfiin akkanaa immoo baay'ee hin deemsisu. Wanti guddaa fedhii irratti hojjechuudha. Gabaa jimaa amma jiru kan uume fedhiidha.
Fedhiin kuni osoo jiraatuu baate qonnaan bulaanis oomishuuf daldalaanis dhiheessuuf hin dhamahu ture.
To'achuun akkuma jirutti ta'e nama jimaa qama'u xiqqeessuuf yaalu qabna. Kuni immoo daa'imman jimaa irraa tiksuudhaani. Jimaa qama'un maaliif akkana baay'ate kan jedhu ilaalamuu qaba.
Manneen kitaabaafi ispoortii itti dalagamu hangamiitu jira. Kanas gaafachuu qabna.
'' Walitti bu'iinsa Oromiyaafi Somaaleetiif maddi daldala jimaafi daddabarsu maallaqaati''
Somaalilaand biyya jalqabaa maallaqa callaa lagatte ta'uufi